Lualaba ho tonga toeram-pizahantany ao amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Kongo, vaovao momba ny dia momba ny dia » Lualaba ho tonga toeram-pizahantany ao amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo
Manana izany rehetra izany i Afrika, fa matetika ny USP manan-danja izay manan-danja tokoa amin'ny indostrian'ny fizahantany dia voatahiry ho tsiambaratelo miambina tsara koa. I Afrika dia mila ireo firenena 54 rehetra handray ny fizahan-tany. Zava-misy ekena fa ny fizahantany no indostria afaka mametraka vola mivantana any am-paosin'ny mponina any amin'ny firenena izay mandray an'io indostria io.
Androany dia miarahaba antsika noho ny fahavitrihan'ny Andriamatoa Richard MUYEJ, Governoran'ny Faritany Lualaba any amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo, ary Andriamatoa Daniel KAPEND KAPEND, Minisitry ny faritany tompon'andraikitra amin'ny fizahan-tany, ny tontolo iainana ary ny fampandrosoana maharitra any Lualaba. Lualaba dia iray amin'ireo faritany 26 ao amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo.
Nijoro tao ambadiky ny masoivohony izy ireo nanatona hilaza an'izao tontolo izao fa i Lualaba dia faritra iray izay manana tontolo voajanahary miavaka izay mijoro tsara tokoa. Ny governoran'ity faritany manan-karena ao amin'ny DRC ity dia mino fa ny fizahantany no lakile hitondrana asa ara-barotra ilaina ho tombontsoan'ny besinimaro sy tombony ara-toekarena ho an'ny faritra.
Ny antontan-taratasy misy ankehitriny momba ity faritra ity dia miresaka betsaka momba ny fahafahan'i Lualaba, nefa mbola tsy fantatra tanteraka io anarana io.
Brand Africa dia eo an-tampon'ny latabatra ary hita ho toy ny tagline mpamily amin'ny famoahana vaovao ny toeran-tany sy faritany. Afrika no kaontinanta afaka mampitombo ny indostrian'ny fizahantany ary hitrangany izany rehetra izany dia mila fantarina sy ampahafantarina ary atao mifanaraka amin'ny besinimaro ny USP lehibe rehetra. Ilaina ny fahitana ireo zavatra manintona toy izany.
Ho fanampin'izany, ny fampitaovana sy serivisy dia mila ampahafantarina tsara amin'ny tolotra hahazoana antoka fa azo aleha ny toerana aleha ary azo tsidihina.
Ny Reniranon'i Lualaba no lehibe indrindra amin'ny renirano Kongo ary mizotra mankany amin'ny Oseana Atlantika.
Talohan'ny nandresen'i Henry Morton Stanley ny sakana nataon'i Afrika Afovoany dia nino fa ny Reniranon'i Lualaba dia mikoriana mankao Neily. Ny fantsakan'ny Reniranon'i Lualaba no loharano lehibe ahazoan'ny tompon-tany Kongo ary ny fahitan'i Stanley ny renirano dia nahatonga ny fahalianan'ny Mpanjaka Leopold II any Belzika.
Lualaba dia ho lasa toeram-pizahan-tany amin'ny zony manokana.
Chancellor federaly alemanina Merkel hanokatra ITB Berlin 2018
Iza ny minisitry ny fizahantany vaovao any Afrika atsimo Derek Hanekom?
Ny fizahan-tany any UK dia miorina amin'ny fahavaratra manjombona
Ny masoivohon'ny Repoblika Dominikanina vaovao any Jamaika dia nanao fitsidihana fanajana tamin'ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika